कुखुरामा हिट स्ट्रेसको व्यवस्थापन...
कुखुरामा हिट स्ट्रेसको व्यवस्थापन…
Published at October 10, 2018 by Dr. Santosh Ghimire
गर्मी महिनामा कुखुरापालक कृषकहरुको लागि आइपर्ने थुप्रै समस्याहरु मध्ये गर्मीको तनाव एक प्रमुख समस्या हो । जसलाई हामी हिट स्ट्रेस पनि भन्ने गर्दछौं । हिट स्ट्रेस गर्मी महिनामा उच्च वातावरणीय तापक्रम र त्यसको सँगसँगै उच्च सापेक्षिक आर्दता भएको समयमा बढी देखा परेको पाइन्छ । त्यसकारण कुखुराको उत्पादकत्वमा नराम्रो असर पर्न जाने हुँदा उचित समयमा उपयुक्त व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । चिसो महिनाको अन्तसँगै सुरुको गर्मी महिनाको दिनहरुमा हिट हिट स्ट्रेसको दर पनि ह्वात्तै बढेको पाइन्छ । वयस्क कुखुराको गर्मीको तनावबाट जोगिन वातावरणीय रुपमा रुपान्तरण गर्नको लागि करिब कम्तीमा ५ दिन समय लाग्ने गरेको पाइन्छ । हिट स्ट्रेसको कारणले कर्टिकोस्टेरोइड हर्माेन उत्पे्ररित भई कुखुराको बृद्धि विकासमा असर गरेको पाइन्छ ।
हामी सबैलाई थाहा छ कि अन्य पशुहरुको जस्तो कुखुरामा पसिना ग्रन्थी हुँदैन त्यसकारण ताप सन्तुलन राख्नको लागि मुख्यतः ४ विधिहरु प्रयोगमा आएको हुन्छ । कुनै पनि माध्यमको प्रयोग नभइ छालाको सतहबाट हावा हुदैं अर्को कुखुरामा वा अन्य वस्तुमा शारीरिक तातो फाल्ने तरिकालाई रेडियसन भनिन्छ । त्यस्तै कन्डक्सनको माध्यमबाट शरीर मा उत्पन्न भएको तापक्रम चिसो वस्तुमा जस्तै केज, सोत्तर, पाइपका लाइनमा सार्ने काम गर्दछ । साथै कन्भेक्सनको माध्यमबाट पनि शरीरको तातो वरिपरीको चिसो हावामा फैलने गर्दछ । माथिका तीन रेडियसन, कन्डक्सन र कन्भेक्सन कुखुराको शारीरिक तापक्रम सन्तुलन राख्नको लागि सघाउ पु¥याउछ जब वातावरणीय तापक्रम २८–३५ डि.से. को बिचमा रहेको हुन्छ । यदि वातावरणीय तापक्रम कुखुराको शारीरिक तापक्रम (४१ डि.से.) जति नै पुग्यो भने माथि उल्लेखित तातोपना नियन्त्रण गर्ने प्रक्रियामा कमि हुन जान्छ ।
यस्तो अवस्थामा कुखुराले मुख खोलेर छिटो छिटो सास फेर्ने काम गर्दछ । जस्लाई हामी प्यान्टिङ्ग भन्दछौ । श्वासनलीबाट पानीको वाष्पिकरण भई ताप बाहिर गइरहेको हुन्छ । १ ग्राम पानीको वाष्पिकरण हँुदा ४५० क्यालोरी बराबरको जीवन धान्ने शक्ति खर्च भएको हुन्छ । यो अवस्थामा कुखुराले पखेटा लतार्ने, दाना कम खाने र पानीको खपत बढ्ने, अण्डा उत्पादनमा कमी आउने र अण्डाको बोक्रा कमजोर हुने, गुणस्तर बिग्रने र अन्त्यमा मृत्यु हुने गर्दछ । अत्याधिक छिटो–छिटो सास (स्वाँ–स्वाँ) फेराइको कारणले फोक्सोबाट अत्याधिक मात्रामा CO2 ग्याँस बाहिर आउँदछ ।
जसले गर्दा रगतमा अम्ल/क्षारको सन्तुलन बिग्रन गई रगतको PH बढि हुन्छ (क्षारीय वृद्धि) त्यसकारण आयोनाइज्ड क्यालसियमको कमि आई अण्डाको बोक्रा गुणस्तर बिग्रनुको साथै हड्डी पनि कमजोर हुन थाल्दछ । फलस्वरुप गर्मीको तनाबबाट जोगाउन उपयुक्त अभ्यासहरु अपनाउन कृषकहरु समक्ष सिफारीस गरिन्छ ।
१) दानाको पौष्टिकताको व्यवस्थापन –
कुखुरालाई दाना रातमा र सबेरै विहान प्रकाशको व्यवस्था मिलाएर दानाखपतमा बढवा दिन सकिन्छ ।
खोरको तापक्रम २९ डि.से. भन्दा हरेक २.५ डि.से. तापक्रमले बृद्धि हुदाँ दानामा पाइने शक्तिको मात्रा करिब २२ अबरिपन ले घटाउने साधारण नियम रहि आएको छ ।
दाना हुने कूल अनुपातमा यथावत राखेर बढाउनुपर्दछ । किनभने कार्बोहाइट्रेड र प्रोटिनको तुलनामा FAT ले सबैभन्दा कम ताप शरीरमा उत्पन्न हुने गरेको पाइन्छ ।
घट्दो दानाको खपतको अनुपातमा एमिनो एसिड जस्तै लाइसिन मिथिथोनीन, भिटामिन, मिनरल इत्यादि दानाको सुत्रमा पोषण विषेशज्ञसँग सरसल्लाह गरेर बढाउन सकिन्छ ।
दानामा एन्टिअक्सिडेण्ट जस्तै Vitamin E २५० मि.ग्रा./के.जी. र भिटामिन C ४०० मि.ग्रा./के.जी.को हिसाबले मिसाउन सकिन्छ ।
दानामा पोटासियम क्लोराइड, एमोनियम क्लोराइड, सोडियन बाइकार्बोनेट इत्यादि फिड एटिलमेन्टहरु दक्ष प्राविधिकहरुसँग सरसल्लाह गरेर थप्न सकिन्छ ।
२) खोरको डिजाइन
खोरको संरचना पूर्व–पश्चिम लम्बाइ उत्तर दक्षिण फर्कने गरी बनाउनुपर्दछ । साथै खोर को छानो अग्लो बनाउनु पर्दछ ।
उपयुक्त खोरको क्षेक्रफलमा निश्चित संख्यामा मात्र कुखुरापालन गर्नुपर्दछ । धेरै बाक्लो हुने गरी कुखुरापालन गर्नु हुँदैन ।
सकेसम्म खोर वरपर खुल्ला ठाउँ राखी खोर वरपरी धेरै बाक्लो नबनाइ रुख उमार्न सकिन्छ ।
छानाबाट ताप हटाउन छानाको छेउमा पानी स्प्रिकलर राखि दिनमा ३ र ४ पटक छानामा पानी छर्कन सकिन्छ ।
तापको परावर्तन गर्न सक्ने सामाग्रीहरुबाट छानाको निर्माण गर्नुपर्दछ । छानामा खरहरुको छाप्रो लगाउन सकिन्छ ।
पानीको ट्याङ्की धेरै तातो हुनबाट जोगाउनुपर्दछ ।
भेन्टिलेशनको उचित व्यवस्थापन मिलाउनुपर्दछ । साथै खोरमा पंखा, वाष्पीय चिस्यान प्रणाली Evaporative coolers वा Evaporative fogging प्रणाली जडान गर्न सकिन्छ ।
३) अन्य व्यवस्थापकीय अभ्यासहरु –
साधारणतया उच्च वातावरणीय तापक्रम हुने अवधिको अनुमान कृषकलाई पहिला नै थाहा हुने हुँदा सोहि अनुरुप उपयुक्त व्यवस्थापन मिलाउनु पर्दछ ।
अत्याधिक गर्मीको समयमा दाना भिजाएर तत्काल दिन सकिन्छ तर ढुसि लाग्नबाट भने बचाउनुपर्दछ अन्यथा कुखुरालाई झन् नकरात्मक असर पर्न जान्छ ।
गर्मियाममा अत्याधिक वातावरणीय तापक्रमको बृद्धिको कारणले खोप बिफल हुने सम्भावना बढि भएकोले विभिन्न रोग लाग्न सक्छ । त्यसैले खोप बिहानको समय (चिसो समयमा) दिनुको साथै खोरको सरसफाइ लगायत जैविक सुरक्षाको प्रवन्ध चुस्त दुस्त र ाख्नुपर्दछ ।
सामान्यतया खोरको तापक्रम २१ डि.से.भएको बेलामा पानी र दानाको औषत खपत दर २ः१ हुन्छ तर यो दर ३८ डि.से. मा ८ः१ हुन्छ । त्यसकारण कुखुरालाई चाहिएको परिमाणमा पिउने पानीको उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।
पानीको खपत बढाउन र दाना कमी खाएको कारणबाट कुखुरालाई पर्न जाने असरलाई न्युनीकरण गर्न इलेक्ट्रोलाइट, भिटामिन, मिनरलहरु अवस्था हेरेर दिनुपर्ने हुन्छ ।
पानीबाट दिइने भ्याक्सिन, औषधि गर्मियाममा बढ्दो पानीको खपतलाई मध्यनजर गरी ठीक तरीकाले दिनुपर्दछ ।
कुखुरामा गरीने नियमित अभ्यासहरु जस्तै ठूडँ काट्ने, भ्याक्सिन दिने, कुखुरा सार्ने काम इत्यादि दिनको चिसो समयमा गर्नुपर्दछ ।
अन्त्यमा, गर्मिको तनावबाट जोगाउन कुखुरालाई एउटै कार्यविधि अपनाएर हुँदैन त्यसको लागि माथि उल्लेखित गरीएका उपायहरु अवलम्बन गरी डिटस्ट्रेसबाट कुखुरालाई बचाउन सकिन्छ ।
डा. सन्तोष घिमिरे
पशुसेवा कार्यालय भरतपुर, चितवन ।
भिटामीनको कमी र लक्षणहरु
व्रोइलर पाल्दा प्रत्येक सप्ताह विचार गर्नुपर्ने कुराहरु (साप्ताहिक तालिका)